Fiteny tamily - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tamily)
Mbola ambangovangony amin'ny resaka fiteny ity lahatsoratra ity ary tokony hofenoina.
Ny fiteny tamily (tamiḻ / தமிழ்) dia fiten'ny mponina tamil (diravidianina taloha). Ny fiteny tamil dia fiteny any India. Ny fiteny tamil dia teny ofisialin'ny Tamil Nadu sy ny tananan'i Pondichery sy sy karîkâl. Teny ofisialy any Singapaoro ihany ko any fiteny tamil. Olona 74 tapitrisa mahery no miteny tamil eran-tany. Araka ny tenenin'ny World Almanac 1994.
Voamarika amin'ny loko menamena ny faritra misy tamil
Teny voasintona amin'ny fiteny diravidianina ny fiteny tamil. Ny fiteny tamil dia anisan'ny fiteny antitra indrindra eto an-tany. Tsy ary niovaova ilay fiteny na dia efa nisy 2500 taona aza. Soratana amina soratra voasintona avy amin'ny soratra brâhmî ny soratra tamil.
Noho ny tsy fahaizan'ny olona manoratra sy mamaky teny tany India nandritry ny taonjato maromaro, samihafa be ny endriky ny fiteny tamil tenenina (koduntamil) sy ny fiteny tamil soratana (centamil). Mitovy amin'izany koa, ny fianarana dia matetika atao am-bava fa tsy an-tsoratra, ary matetika miova ny fanononana ny teny arakaraky ny tanàna, ary tsindraindray, tsy misy fifandraisana amin'ilay teny soratana intsony ilay teny tenenina.
Amin'ny ankapobeny, misy tamil ampiasaina amin'ny haisoratra, ampiasain'ny gazety, ny boky, sns. manaraka ny fitsipi-pitenenana, ny tsipelina ary ny rafi-pitenenana, ary ny tamil an'ny mponina, ampiasain'ny media (radio, fahitalavitra) : io fisiana io azo lazaina hoe diglossie amin'ny teny frantsay. Ny tamil-n'ny mponina dia mety miovaova arakaraka ny firenena, arakaraky ny faritany ary tsindraindray arakaraky ny tanàna : na dia olona mifehy tsara ny tamil soratana, dikan'izany ofifialy, dia mety tsy mahazo io fiteny io, matetika mampiasa teny vahiny (lugej = entana, avy amin'ny teny anglisy luggage, zanti = mahafatifaty, avy amin'ny teny frantsay gentil) navadika arakaraka ny fanononana tamil. Ny anton'io dia ny fisian'ny mpiteny tamil any ivelany, ampifangaroiny amin'ny teny tenenina eo amin'ny toerana isiany ny teny tamil. Ny tamil tenenina any India dia tamilim-ponina, ary ny tamil tenenina any Sri Lanka dia tamil mifandray kokoa amin'ny tamil soratana.
Hatry ny fanombohan'ny taonjato faha 20, ampifanakekezan'ny mpandini-pitsipi-pitenenana tamil ny fiteny tamil soratana amin'ny tamil tenenina, fa mitazona ny mahasamihafa ilay fanoratana antitra be.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_tamily&oldid=793959"
Dernière modification le 6 Aogositra 2016, à 03:37
Voaova farany tamin'ny 6 Aogositra 2016 amin'ny 03:37 ity pejy ity.